Olan’i Gresy Manosika Ireo Foko Grika Sasantsasany Hiverina Amin’ilay Nosy Tiorka Niaviany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Jolay 2015 11:15 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, русский, Română , বাংলা, Deutsch, Aymara, Ελληνικά, Català, Nederlands, English
Hita ao amin'ny Wikimedia Commons ny sary nasongadina etoana, avy amin'i Bilderbrei (CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported).
Vao haingana ny vavahadim-baovao Grika Reporter sy Anastassios Adamopoulos no namoaka tantara iray izay hita voalohany tao amin'ny “Turkish Hurriet Daily News” ety anaty aterineto, nafantoka tamin'ny fironana iray izay ahitàna fianakaviana Grika marobe mandositra ny olana ara-toekarena ratsy be ao Gresy amin'ny alàlan'ny fiverenana any amin'ny Nosy Tiorka niavian-dry zareo, Gökçeada ao amin'ny faritanin'i Çanakkale, fantatra amin'ny anarana Grika hoe Imbros.
Ao anatin'ilay tatitra, miarahaba ireo Grika mandray anjara amin'ny famelomana ny toekarena ao amin'ilay nosy ny Ben'ny Tanàna ao an-toerana, Ünal Çetin, miaraka amin'ireo fianakaviana marobe niverina an-tanindrazana nanokatra fivarotana madinika sy trano fisakafoana mba ho fivelomana. Mandritra izany, ireo Tiorka sy Grika mpampiasa ny media sôsialy dia niara-nampiasa ny tenifototra #Imvros sy #Gokceada hankalazàna ny hakanton'ilay nosy.
Maro ireo fianakaviana Grika, izay taranaka avy aminà foko Grika na notezaina tao amin'ilay nosy nanomboka tamin'ny fahagola ka hatramin'ny tapatapaky ny taonjato faha-20, no manapitra ny lohataonany ao Imbros. Ireny fianakaviana ireny indrindra araka izany no nifindra nankany Gresy noho ny fampielezankevitra fanavakavahana namporisihan'ny fanjakana. Milaza zavatra betsaka amin'ny haavon'ny zava-doza mamely an'i Gresy ny fiverenan-dry zareo, hatramin'ny herin'ny fifamatorany amin'ilay nosy, na dia tsy tonga lafatra manao ahoana aza ny fifandraisana eo amin'i Ankara sy Athenes.
Ankoatra izay, raha toa mitohy mivoaka ao amin'ny firenena nilaozan-dry zareo ireo vaovao ratsy momba ny teokarena ratsy dia ratsy, ny fotokevitry ny fiverenan-dry zareo dia iray amin'ny famerenana indray ny very sy ny fiverenana :
Niverina nisokatra indray ny sekoly [ambaratonga fototra tsy miankina Grika, Gökçeada] taorian'ny 49 taona. Mpianatra roa monja #imvros #shcool #students